Wararkii U Dambeeyay Ee Caabuqa Coronavirus Ee Caalamka Oo Dhan AwdalMedia Awdalmedia Wararkii U Dambeeyay Ee Caabuqa Coronavirus Ee Caalamka Oo Dhan
Wararkii U Dambeeyay Ee Caabuqa Coronavirus Ee Caalamka Oo Dhan
Spain waxa la diwaan galiyay 849 dhimasho cusub ah 24kii saac ee u dambeeyay taasi oo dhimashada guud ee dalkaasi ka dhigaysa 8189 qof oo u dhintay coronavirus.
Ingiriiska dhimashada ayaa kor u kacday kaib markii 24kii saac ee u dambeeyay ay dhinteen 381 qof, waxana ay dadka ku dhintay UK ilaa hada tiradoodu dhan tahay 1789 qof.
Maraykanka, xayiraadii dhinaca dhaqdhaqaaqa ahayd iyo awaamiirtii dhinaca kala fogaashaha bulshada ahaa ayaa loo badinayaa in ay wax ka tartay faafida caabuqan ee gudaha dalkaasi, waqti uu wadankaasi tirada kiisaska ah ee laga diiwaangaliyay ay ku laba-laabmayso tan Shiinaha oo ahaa meeshii uu xanuunku ka bilaabmay, waxana maraykanka laga diiwaangaliyay 163500 oo qof oo uu caabuqu haleelay, halka ay 3000 oo qof u dhinteen.
Guud ahaan Caalamka tirada dadka uu haleelay caabuqan Covid-19 ayaa ah 800000. waqti ay tirada dadka ka bogsaday dhantahay 165,000 oo qof in ka badan 37,500 oo qofna ay aakhiro ugu huleeleen.
Somaliland ayaa xaqiijisay Kiisaskii ugu horreeyay ee Cudurka Corona Virus.
Wasiirka Caafimaadka Somaliland ayaa sheegay in ka dib markii baaritaano lagu sameeyay dad horay looga shakiyay labo ruux oo ka mid ah laga helay Corona Virus.
Laba qof ayaa kala ah nin Shiinaha u dhashay oo Berbera jooga iyo nin reer Burco ah oo UK ka soo laabtay.
Somaliland waxa ay sheegayaan in labadda ruux ay Xaaladood Caafimaad wanaagsan tahay, islamarkaana hadda ay la tacaalayaan laamaha Caafimaadka.
MARAYKANKA: GOBOLKA NEW YORK OO AH MEESHA UGU KIISASKA IYO DHIMASHADA BADAN
Dhimashada gobolka New York ee dalka Maraykanka oo ah gobolka uu sida ugu ba’an u saameeyay coronavirus ayaa korodhay gaadhayna 1550 qof halka ay markii hore ka ahayd 1218 qof.
Sidoo kale tirada kiisaska cusub ee gobolkan ayaa korodhay gaadhayna 75, 795 kiis, waxana ay tan ka dhigaysaa Maraykanka gobolka ugu ba’an ee uu sida xun u saameeyay Covid-19.
“Caabuqan waa ka xoogan yahay, waana ka khatar badan yahay sidii aan filaynay” ayuu yidhi badhasaabka gobolkaasi Andrew Cuomo, waxana uu intan raaciyay “Wali waxa aan fananaynaa buur, buurta dusheeda ayuuna dagaalka ugu xoogan ka socdaa”
Hadalkan ayaa waxa uu ka soo yeedhay badhasaabka waqti wiilka ay walaalo yihiin oolagu magacaabo Chris Cuomo uu ka mid noqday dadka uu haleelay xanuunka covid-19.
INGIRIISKA: TIRADA DHIMASHADA OO KORODHAY
Tiradii ugu badnayd ee dad ah ee u dhimatay Coronavirus ayaa laga soo sheegay Ingiriiska inay ku dhimatay 24kii saac ee u dambeeyay, taas oo dhan 381 qof.
Wasiirka Caafimaadka ee UK oo qoraal soo dhigay bartiisa Tweeter-ka ayaa maalin murugo iyo dhimasho xanuun kulul ku tilmaamay xaalaka UK waxana uu tilmaamay in dhimashadu ay gaadhay 1789 qof halka ay shalay ka ahayd 1408 kiis.
Ingiriiska tirada kiisaska ah ee la diiwaangaliyay ayaa dhan 25,150 qof, sida ay shaacisay waaxda Caafimaamidka iyo Daryeelka Bulshada ee Wasaarada Caafimaadka UK.
HINDIYA: DAWLADA OO MUSLIMIINTA KU EEDAYSAY FAAFITAANKA COVID-19.
Masuuliyiinta Caasimada Hindiya ee New Dalhi ayaa quful ku dhajiyay dhisme uu lahaa Ururka Tablight Jamaat, oo ah urur ay leeyihiin Tabliiqiyiin Muslimiin ah, kuwaas oo lagu eedeeyay inay iska indho-tireen bandoodii dalkaas lagu soo rogay, kadib markii ay shaaciyeen in kulan diimeed ay qorsheeyeen inuu qabsoomo inta u dhaxaysay 13kii ilaa 15kii March uu sidii qorshahu ahaa uu u qabsoomay.
Maamulka Dalhi ayaa sidoo kale booliska ka codsaday inay dacwad ka dhanka ah ururkan u gudbiyaan maxkamada, iyaga oo ku soo oogaya kiiska ah ku-xad-gudub amar dawladeed iyo inay ku guul darayteen inay bulshada kala fogeeyaan.
RUUSHKA: DHAQTAR SALAAMAY PUTIN OO CORONA LAGA HELAY
Dhaqtar la kulamay todobaadkii hore Madaxwayne Putin waqti uu booqday cisbitaal lagu dabiibo dadka uu sooritay coronavirus oo ku yaala caasimada Moosko ayaa laga helay caabuqa covid-19.
Cisbitaalkan oo lagu magacaabo Kummunarka ayaa intii uu Madaxwayne Putin ku suganaa waxa gacan qaaday Dr. Denis Protsenko oo aan gacmaha gashanayn wax galoofis ah, isla markaana faahfaahin ka siiyay xaalka bukaanka iyo guud ahaa cisbitaalka.
Aqalka Kriemlin-ka ee Ruushka looga arimiyo ayaa sheegay in Madaxwayne Putin si joogto ah baadhitaan loogu sameeyo xaalkuna uu yahay mid wanaagsan sida ay warisay warbaahinta RIA ee dalkaasi Ruushka.
JAPAN: RAYSAL WASAARAHA IYO KU XIGEENKIISA OO LA KALA KAXEEYAY
Raysal wasaare Abe iyo Ku xigeenkiisa Taro Aso ayaa la kala fogeeyay, waxana la sheegay in shirar dambe aanay yeelan doonin madaxda dalkaasi, si meesha looga saaro in ay isku imaatinkoodu sababo fiditaan madaxda dalkaasi ah.
Go’aanka ayaa soo baxay waqti yar kadib markii Wasiirka Arimaha Dibada ee Japan uu ku dhawaaqay in Ajinabiga ka socda dalalka Maraykanka, Ingiriiska Kuuriyada Koonfureed iyo Badi dalalka Yurub aanay dalkaasi soo gali karin.
Shirarka laga baajiyay Raysal Wasaaraha iyo Kuxigeenkiisa ayaa waxa kale oo ku jira shirarkii ay la yeelan lahaayeen madaxda dalalka la mamnuucay dadkooda iyo dublamaasiyiintooduba inay soo galaan dalkaasi.
Waqti hore oo maanta ah ayay ahayd markii Japan uu dadkiisa uga digay in aanay tagin 72 dal oo caalamka oo u badan qaarada Yurub.
SPAIN: TIRADA DHIMASHADA OO KORODHAY
Spain waxa 24kii saac ee u dambeeyay ku dhintay 849 qof, taas oo ah tiradii ugu badnayd ee maalin gudaheed dalkaasi ku dhimata, waxnaa ay tan ka dhigaysaa tirada guud ee dadka u dhintay caabuqan ee dalkaasi 8189 qof
Tirada guud ee kiisaska cusub ah ee dalkaasi ayaa iyaduna koroday waxana ay gaadhay 94417 halka ay markii hore ka ahayd 85195 qof.
Xaalka Spain ayaa sii xumaanaya, waxana meelo ka mid ah dalkaasi laga soo sheegayaa in cadho dadwayne ay ka dhalatay bandooda saaran wadankaas ee ay xukuumadu ugu gol-leedahay inay ku yarayso faafitaanka coronavirus ee gudaha dalkaasi.
MADAXWAYNAHII HORE EE CONGO II U GEERIYOODAY CORONA
Jacques Joaquim Yhombi-Opango oo ah madaxwaynahii hore ee dalka Jamhuuriyada Congo ayaa u dhintay caabuqa covid-19, sida ay shaaciyeen xubno ka tirsan qoyskiisa.
Madaxwayne Yhombi-Opango ayaa ku dhintay cisbitaal ku yaala Magaalada Paris maalintii Isniintii, waxana ay da’diisu ahayd 81 jir.